Takambotamba nekuongorora mhando dzemitambo saka unosungirwa kuwana chimwe chinhu chinokodzera. Kunyangwe iwe uchitsvaga yemahara-yekutamba Hondo Royale, yakanyanyisa kudzikisira RPGs kana tactical vapfura, isu tine zvishoma zvezvose.
Type: Kutanga-munhu akasununguka-kutamba Hondo Royale
Chii chinoita kuti chinakidze? Helo kirasi system uye vatatu-munhu squads
Mukugadziri: Respawn Entertainment
Dhawunirodha kubva kuHwakabva
Apex Legends ndeye kushamisika kurohwa kwakabuda pasina kwese. A Hondo Royale mutambo kubva kune vanogadzira Titanfall iyo iri kutora iyo yekutamba nyika nedutu. Uyu mutambo waive nevatambi vanodarika miriyoni pazuva rekutanga uye zviri nyore kuona kuti sei.
Chii chinonzi Apex Ngano? Iyo yakasununguka yekutamba Hondo Royale yePS4, Xbox One uye PC yakatsanangurwa
Uyu mutambo weHondo Royale uine twist sezvo ichiratidzira zvishoma zvinhu zvausingawanzo kuona mune iyi genre. Iko kugona kumutsidzira vakafa vatambi vechikwata, mutambo mutambo uyo unongobvumidza vatatu vatambi vechikwata (hapana vaviri kana solo kutamba pano) uye, zvinonyanya kufadza, gamba kirasi system inosanganisira akasiyana akasiyana "Legend" mavara ane akasiyana kugona uye hunyanzvi.
Takataura here kuti ndeye mahara?
Type: Yemahara-kutamba-yechitatu-munhu FPS
Chii chinoita kuti chinakidze? A WW2 kurongedza ine hilariously inonakidza kitchenware-based zvombo
Cuisine Royale haizi imwe yeiyo Hondo Royale mutambo, zvakare ndeimwe yeakanakisa. SaFortnite, yakasununguka kutamba, asi kusiyana nemamwe acho haizvitorere zvakanyanya.
Mutambo uyu wakavakirwa kunze kweinjini iri kuuya WW2 MMO Vakanyoresa uye inoratidzira huwandu hwenhando uye hunyanzvi hwemutambo wemitambo watinoda. Makwenzi akachena uye anonakidza mutambo kuenzanisa zvirokwazvo anoita Cuisine Royale inonakidza kutamba.
Semuenzaniso, iwe unogona kushongedza akakosha maslippers ayo anokubatsira iwe kusvetuka zvakakwirira kana mapapiro shin mapads ayo anobatsira kumhanya kwako nekukurumidza, asi kuapfeka kunokuvadza kusimba kwako uye zvinoreva kuti haugone kumhanya kwenguva yakareba usina kuneta. Pane muchina weSlot waunogona kushandisa mari yegoridhe pairi kuhwina "mibairo" (zvombo zvitsva uye magiya) asi kuishandisa kunoita ruzha rukuru runopa chinzvimbo chako kure. Kugara wakangwara kugadzirisa kuti mutambo uyu uve wakakodzera kutamba uye kushanyirazve.
Chii chinoita kuti chinakidze? Kuvaka mechanics, irinyore kuwana gameplay uye hombe mutambi mutambo
mutsikisi: Epic Mitambo
Mukugadziri: Epic Games
Dhawunirodha kubva Epic
Zvinotoda kuenda pasina kutaura, asi iwe haugone kunyatso kuve neyakanakisa mitambo runyorwa pasina kusanganisira Fortnite. Ndiyo imwe yemitambo mikuru yemitambo yekutsvaira pasirese. Fortnite inogona kunge isiri PC yakasarudzika, uye haisi iwo mutambo wakanakisa paPC, asi ine mukurumbira mukurumbira.
Chii chinonzi Fortnite Hondo Royale? Inoshanda sei uye ndeipi midziyo iwe yaunogona kutamba nayo?
Zvinodiwa nevabereki kuziva nezvaFortnite
Fortnite yakatora iyo yaitodiwa Battle Royale genre uye yakavhenganiswa mu base-kuvaka, katuni mifananidzo uye zvimwe zvakawanda kunze kwekuita kuti mutambo ukwikwidze kune vakawanda vateereri. Zviri zvemahara- kutamba uye zvakare zvinogara zvichizorodzwa nezvitsva zvemukati zvinogona kuwanikwa kana kutengwa ne "Battle Pass“. Izvi ndezvokusarudza zvekutenga zvinopa zvipoda zvakadai sekutakura mascreen, mabhana, mavara emunhu, akasiyana magirazi uye nezvimwe. Zvirokwazvo hazvibhadhare-kuhwina, asi zvinonakidza kwazvo.
Chii chinoita kuti chinakidze?
Makaro ndiyo RPG yazvino kubva kuSpider, yakaiswa munzvimbo yezana ramakore rechi17 iine mashiripiti, rufu uye chirwere. Uyu mutambo une yakasarudzika yekuona dhizaini iyo yakafuridzirwa neEuropean Baroque art.
Nyaya yeGreedFall inotenderedza vagari, varwi vehondo uye vanovhima pfuma, vese vari kutiza denda, kusvibiswa uye chirwere chisingarapike. Rwendo rukuru rwakamirira mavara aya aine nzira izere nezvakavanzika uye kusagadzikana kunowedzera pakati pevagari vemo.
Uyu mutambo zvirokwazvo une zvakadzama hunhu kudyidzana uye yakapfuma nyaya. Kurwisana, kudyidzana, kunyengedza uye kuba zvese izvi zvinonyanya kuratidza kune iyi, asi inyaya dzinoburitsa munyika yakakukomberedza ndiyo inonyanya kutariswa. Kana iwe uchinakidzwa neRPG yakapfuma uye inonakidza saka iyi ndeyako. Iwe zvakare unowana kutenderedza maawa makumi matanhatu kubva mumutambo uyu futi, unova wakakosha kukosha kwemari kana pasina chimwe chinhu.
Assassin's Creed: Odyssey hapana mubvunzo inoshamisa. Takafunga Mhemberero yakanga yakanaka uye kuti Ubisoft yainetseka kuikumha, asi isu takatadza. Uyu mutambo ndiyo yakanakisa uye yakakura mutambo mune franchise uye zvakanyanya mukati-pakadzika zvakare.
Assassin's Creed Odyssey ongororo: Sparta-cular
Iyi haisi imwe chete yekumhanyisa-kwe-iyo-yekuwedzera kuwedzera, asi kupenya kwakavhurika-kwepasirese kuri parizvino kuri kuwedzera RPG-kufanana nakare kose Izvo zvakare zvinoshamisa uye haina magumo enzvimbo ekuongorora. Iwe hapana mubvunzo unonyudza makumi, kana asiri mazana emaawa mune ino saka inomiririra kukosha kwemari, kana pasina chimwe chinhu.
Type: Chiitiko-chiitiko chinotyisa RPG
Chii chinoita kuti chinakidze? Nzvimbo yakasviba uye isingafadzi mumashure mehondo London, inorema inorondedzera yakatarisa uye yakawanda sarudzo yekuruma kana kwete
Mukugadziri: DONTNOD Varaidzo
Vampyr yakagadzwa muLondon, 1918. Guta rakaparadzwa nefuruwenza yeSpanish uye iri kutambura nekuguma kweHondo Huru. Mitumbi iri kuunganidzwa uye migwagwa yakazara nehurombo. Senge kuti izvo zvaive zvisina kukwana zvakakwana, mavampire anovandirawo mumigwagwa ine rima uye iwe uri mumwe wavo.
Vampyr ongororo: Zvese kutaura uye hapana kuruma
Ichi chiito RPG nekutarisa kwakanyanya pane nhoroondo uye arching nyaya. Kana iwe uchida kuonana kwakanaka uye kune dzimwe nguva kuteura ropa saka mutambo uyu unofanirwa kunyura mazino ako mukati.
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo inonakidza kubuda kunze kweMad Max zvakasikwa nekunakidzwa kurwa uye motokari-yakavakirwa kunakidza
mutsikisi: Warner Bros. Anofambidzana Nhandaro
Mukugadziri: Avalanche Studios
Mad Max ari kuwedzera izvozvi, asi izvo zvakanaka nekuti zvinoreva kuti inogara ichitengeswa pasina kana chinhu. Ndiwo mutambo wekutsemuka nehondo-ku-ruoko kurwa iyo inonzwa kunge mitambo yeBatman kubva kuRocksteady Studios, inongotyisa uye ine hutsinye.
Mad Max kutanga vatarise wongororo: Vast uye kutsamwa
Iyo inovhurika-yakavhurika-yepasirose mutambo wakagadzwa mumashure-apocalyptic Mad Max zvakasikwa ine dash yeese maviri hunhu uye mota RPG-senge kufambira mberi. Ndiwedzere yako giya, zvombo uye mota kubvarura iyo nzvimbo. Maawa nemaawa ekunakidzwa.
Yerufu tambo Mugomba
Type: Inopindirana vhidhiyo vhidhiyo
Chii chinoita kuti chinakidze? Chikamu chakarondedzerwa chinoshamisa chekunaka kwemitambo.
mutsikisi: Kubazi Narrative Ltd
Mukugadziri: Bazi reNhoroondo Ltd
Deathtrap Dungeon zvirokwazvo kuzorora kubva pane zvakajairwa. Iyi inoratidzira yevhidhiyo nhanho yakavakirwa mubhuku raIan Livingstone. Iyo inorondedzerwa naEddie Marsan uye inonzwa senge ari kukuverengera iwe nyaya yekurara, asi nesarudzo yemutambo unotamba sei. Izvo zvinoshamisa zvinonakidza uye zvinonakidza futi. Maawa mashanu evhidhiyo uye nyaya inoshamisa inoita kuti iyi ive mutengo wekutenga.
Type: WW2 yakavakirwa timu-based shooter
Chii chinoita kuti chinakidze? Mechanics ekuparadza, huwandu hwemotokari uye zvombo zvekutamba nazvo uye neruzhinji rwemitemo zvakare
Mushure meKudaidzwa kweDuty kudzoka kumidzi yayo ndokudzokorora WWII, Hondo yakateedzana.
Hondo yeV V wongororo: Nyika yeunyanzvi WWII Bhowa
Paive nemanzwiro akasanganiswa munharaunda asi hapana kuramba kwekuti Hondo yehondo 5 inokatyamadza uye inoratidza kuvandudzwa kwakawanda kunoitisa sarudzo inonakidza kune vateveri venhevedzano kana vapfura vepamhepo kazhinji. Kana iwe uchida kuyedza usati watenga, panogara paine sarudzo yekunyorera ku Kwakatangira Kuwanikwa iyo inokutendera iwe kutamba wandei muunganidzwa wemitambo nemari diki yemwedzi.
Type: Vhura-nyika zombie kupona
Chii chinoita kuti chinakidze? Parkour yekufambisa system, co-op gameplay uye inotyisa kupinza chombo
mutsikisi: Techland Kuburitsa
Kufa Chiedza ibwe chairo remutambo wekupona we zombie uyo wakatanga kuburitswa muna 2015. Chave chiri chipo chinoramba chichipa kubva ipapo, hazvo, nemagadziriso emahara ezvakawanda zvemukati uye nenguva dzakanaka.
Pane mijenya yekuda neKufa Chiedza - iri yakavhurika-yepasirese mutambo wekupona uyo unokwikwidza iwe kumarudzi ese ezve zombie njodzi. Asi iyi haisi yako yepakati shooter sezvo ichiratidzira inoshamisa parkour mechanics iyo inokuona uchimhanya uye uchisvetuka pamusoro pematenga edzimba, uchikwenya zvivakwa uye uchimhanyisa mhiri kwenzvimbo inotsvedza kuti urambe uri mupenyu.
Kufa Chiedza kudzokorora: Kufemera hupenyu hutsva muZombie mitambo
Kufa Chiedza kunonyanya kunakirwa neshamwari muco-op modhi uye hatina magumo ekunakidzwa nenzira iyi.
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo inopenya 1980s vibe, mumhepo yemamiriro ekunze uye inoonekwa isingaperi yekuwanikwa kweammo
mutsikisi: Avalanche Studios
Mukugadziri: Avalanche Kudhinda
Generation Zero inotiyeuchidza zvimwe 1984 firimu Red Dawn, chete nemarobhoti panzvimbo pesky Commies. Iyi yakavhurika-nyika FPS inokukanda iwe mune imwezve nguva yenguva dze1980s Sweden uko kwakasiyana michina ehutsinye yeese masikirwo uye saizi inofamba nyika ichirwisa chero chinofamba.
Migwagwa nedzimba hazvina vanhu uye hapana mumwe munhu ari kuona, saka zviri kwauri kuti uone zvakaitika uye uburitse zvakavanzika zvepasi. Isu takawana iwo mamiriro eichi chisingadaviriki apo isu takatsvaka nzvimbo yakakura yakavhurika tichitsvaga zvinyorwa. Mineti imwe murunyararo tichinakidzwa nemaonero akagadzirwa zvakanaka, inotevera nekushingirira kurwira hupenyu hwedu kurwisa hulking simbi mhuka uye madiki dandemutande-kunge marobhoti ari kuyedza kudya kumeso kwedu.
Iyo nyaya inotora zvishoma kufambisa uye kune kwakawanda kufamba uye kupamba kuita, asi Generation Zero zvirokwazvo ine mhepo yemagetsi. Izvo zvakare haina magumo ammo, ayo mubhuku redu haambove chinhu chakaipa.
Takanakidzwa chaizvo Quantum Break izvo hazvina kushamisika sezvatiri isu tinoda chaizvo kufadza zvese Remedy Entertainment inoita. Alan Wake, Max Payne, rondedzero inoenderera - tiri kutarisira Kudzora kwakangonaka.
Quantum Break imwezve cinematic masterpiece inorondedzerwa se "chikamu mutambo, chikamu rarama chiito show" - asi usazvidya moyo haisi imwe yemitambo yakaipa iyo yakanyanya kucheka kupfuura kunakidzwa. Ingori kupenya kwakajeka kwekunyepedzera kwenguva, kuridza pfuti uye nenguva dzakanaka.
Tagara tiri vateveri vakuru veHitman dzakateedzana. Kuba, kuurayiwa uye nguva dzakanaka chaizvo dzakazara muHitman 2. Uyu mutambo unozvirumbidza kwazvo, mamapu akakura uye nzira dzakawanda dzekupedzisa mamishini ako zvinoreva kuti kutamba kumwechete hakuna kumbobvira kwakafanana neinotevera.
Hitman 2 ongororo: Anonyatsoita sublime chikabvu mutambo
Hitman 2 inogona kuve yakaoma, inoshungurudza uye inofara chose. Isu tinoda kupedzisa kuuraya kusasiya kana trace uye kuita kufa kwechinangwa kuita senge tsaona isinganzwisisike. Asi kana zvese zvimwe zvikatadza, panogara paine chikwama.
Platform: Windows chitoro
Type: Kutanga-munhu chiito chinotyisa
Chii chinoita kuti chinakidze? Mutambo wemuchadenga une steampunk vibe mune zvisinganzwisisike zvimwe zvakasikwa naNikola Tesla kusimuka kune chimwe chinhu chine shady.
mutsikisi: Wired Zvigadzirwa
Mukugadziri: Dutu mune Teacup
Zvione pane Epic Store
Pedyo neSuva inonakidza uye yemuchadenga chiito chinotyisa mutambo ine steampunk vibe. Iwe unotamba semutori wenhau Rose Archer, mukadzi ari pachinangwa chekutsvaga hanzvadzi yake mukati meiyo isinganzwisisike Helios - chigadzirwa chakazara nevasayendisiti vachisundira miganho yesainzi yemazuva ano nefizikisi.
Iyo Helios ndiyo brainchild yaNikola Tesla, uyo mune ino yekunyepedzera muchadenga ari kurwa naThomas Edison yekutonga kwetekiniki pasirese. Asi chimwe chinhu chakaipisisa chakaitika mungarava uye ibasa rako kuti uzive kuti hanzvadzi yako inobatanidzwa sei apo ichiedza kuponesa hupenyu hwayo.
Zvakaoma kutaura zvakawanda nezvazvo pasina kukanganisa kunakidzwa, asi padyo neSuva zvinonakidza zvechokwadi. Iyo inononoka kufamba uye inosanganisira kufamba kwakawanda, kubaya uye kusimudzira mapuzzle akasiyana siyana, asi iyo yemuchadenga vibe uye nhaurwa yenyaya yemutambo uyu yakashongedzwa zvakanaka. Kunyanya kana iwe uchida zano raNikola Tesla semupengo-musayendisiti achiburitsa gehena pasi pano. Takanyatsonakidzwa The Invisible Hours iyo yakanga yakafanana neimwe zvakasarudzika vibe kwairi uye Pedyo neZuva yakafanana, chete zvishoma mabonki.
Type: Team-based wekutanga-munhu kupfura
Chii chinoita kuti chinakidze? Nenzira isina kuchenjera co-op mutambo
mutsikisi: Makamuri gumi Akabatanidzwa
Mukugadziri: 10 Makamuri Akabatanidzwa
GTFO inodzikwa seyakaomarara munhu wekutanga shooter stealth inotyisa mutambo. Iko kutora kukuru kubva kune iro izita rekuti "hardcore" sezvo mutambo uyu uri kupenga kwakaomarara. Yakagadzirirwa kutambidzwa neshamwari muchikwata chevarume vana nekutaurirana kwepedyo, kuronga kwekungwarira uye yakawanda yakawanda yekuba.
Kutamba chero imwe nzira kuchakuita kuti urwadziwe kakawanda.
Pfungwa iyi yakapusa zvakakwana, iwe unotamba vasungwa vana vakatumirwa pasi mukudzika kuti vapedze zvinangwa iwe uchirarama uchipesana nezvimwe zvisikwa zvisina kunaka. Kune rima zasi uko uye iwo madhimoni anoita kune mwenje uye kurira. Gadzira rakanyanyisa raki uye gehena rese rinosununguka. Izvo zvazvinoitika nenzira isingadzivisiki, kunyangwe iwe ukangwarira. Hatina kuwana GTFO inotyisa, asi yakaoma kwazvo. Saka kana iwe uri munhu wemunhu anoda chinetso chakaoma, saka izvi ndezvenyu. Iko zvakare kwekutanga kuwana uye pasina mubvunzo uchaona akawanda marongedzero munguva pfupi iri kutevera ayo anoita kuti ive iri nani.
Type: Yetatu-munhu kupfura / co-op zombie Bhowa
Chii chinoita kuti chinakidze? Masasi ehunhu hunowoneka uye akamisikidza masisitimu. Uber inokurumidza kufambisa zombie hordes.
mutsikisi: MadDog Mitambo uye Focus Imba Inoshanda
Mukugadziri: Saber Interactive
Zvione pane Epic Magemhu
Hondo Yenyika Z ndeyechitatu-munhu shooter zvichibva pafirimu rine zita rimwe chete. Iwo mana-mutambi mushandirapamwe mutambo uyo unokwenenzvera iwe neshamwari dzako pakurwisa hombe isingaregi mapute enyama-anodya zombies.
Uyu mutambo zvakare unoita kuti iwe uongorore nyaya dzenyaya uye mavara kubva kutenderera pasirese - nematanho akaiswa muNew York, Moscow neJerusarema. Asi kunakidzwa kuri kuuya nenzira yechimiro chenguva refu isingamhanye-mhanya yeasina kufa. Zvakare se "yepamberi gore uye yekuchekacheka sisitimu" iyo iri kunyatso kusimbisa kugutsa kana iwe uchicheka pasi mafungu ehuropi-vanogamuchira neako shamwari.
Akasarudzika makirasi emakirasi uye kugona kutamba neshamwari dzako kunoita Hondo Yenyika Z kuputika. Zvakaoma kusazvienzanisa neRuboshwe 4 Vakafa, asi icho hachisi chinhu chakashata sezvo icho chaive chinotyisa zombie shooter dzakateedzana futi. Kana kuuraya iyo isina kufa hakuna kukwana, kune zvekare nzira yevamiririri vazhinji yekurwisa iyo kunze kwevamwe vatambi pamhepo.
Chii chinoita kuti chinakidze? kuputika kweNazi ne pal yako apo ichitamba savanasikana vaBJ Blazkowicz.
Mukugadziri: Mitambo yeMuchina, Arkane Studios
Humwe kupenya kubva kuWolfenstein franchise, ino nguva ne-yakazara-pa-co-op kubheja kubwinya muNazi-yakazadza 1980. Unotamba semumwe wevanasikana veBJ Blazkowicz mapatya, uchikava maNazi pasi uye uchitora mazita. Ino nguva kutenderera, chiito chinoitika muParis-inogarwa neParis. Zvese zvakajairwa pamusoro-pe-pamusoro peNazi zvombo, michina uye zvimwe zvinoita kuratidzika uye kune mhirizhonga yakawanda zvakare.
Youngblood zvirokwazvo haisi yenguva dzose Wolfenstein kubuda. Isu tinowana yakasarudzika Destiny vibe kubva pane ino. Iyo FPS ine RPG zvinhu. Iwe unoshanyira nzvimbo dzakasiyana muNazi-inogarwa neParis, mamisheni akazara uye unodzokera kunheyo, chete kuti ubudirezve kunzvimbo imwechete kune rakasiyana basa. Inogona kunzwa kugaya dzimwe nguva, asi kukwidziridza giya rako, zvombo uye hunyanzvi zvinokutendera iwe kuti utsvage nzira nyowani dzekupura maNazi uye kuvhura nzvimbo nyowani dzenzvimbo dzega paunenge uchienda.
Iyo inosimbisa ndeyechokwadi iyo co-op modhi. Iwe hautombofaniri kuve wega muridzi mutambo - kana munhu mumwe akatenga iyo Deluxe edition yemutambo, mumwe wacho anogona kutamba iyo yese chinhu yemahara mu co-op modhi. Zvese zvavanoda kuti vaite tora demo uye wana kukokwa.
MORDHAU kupenga kwakazara uye ndosaka tichida. Uyu munhu wekutanga-mutambi wevazhinji slasher uyo anokuisa iwe munyika yekunyepedzera panhandare ine ropa rakatarisana rakatarisana nemhomho yevamwe vatambi vanotsvaga ropa rako.
Sarudza yako yemhando kirasi, tora yako giya uye kuchaja kuhondo neropa-curdling yehondo kuchema. Swing refu banga uye bvisa mumwe munhu noggin kana rova ​​uropi hwavo nehukuru demo, sarudzo ndeyako. MORDHAU iri kuranga zvachose uye uchafa zvakanyanya, asi zvinonakidza zvakare. Zvakaoma kusaita enzaniso Chivalry: Hondo dzeMiddle East asi icho hachisi chinhu chakashata sezvo mutambo iwoyo waivewo unonakidza kwazvo.